Umhla My Pet » Imithetho ezintandathu Inokukunceda Lawula Pet Partner wakho
Ukuba uza ga umnini pet, ukuba uhamba ukuthandana pet umnini pet ngayo. Nokuba ngababuthuntu nyaka elishumi Retriever yabo endala Golden okanye Cockatiel yabo ingxolo, isitshixo intliziyo yabo ngokuthi isilwanyana yabo.
Kanye njengokuba koyikwe iqabane lakho elitsha kunye nemida ubudlelwane yakho entsha, ngoko ke kufuneka ukuba uyabahlonela izilwanyana zabo yaye iqabane lakho abathabathele.
Ukuba nje warholela ukuthandana nomntu ongumnini isilwanyana, Ungakruquki waphula le migaqo elula.
Musa ukuzama isebenzisane-umzali. Ukuba iqabane lakho na ukukhumbula ukuba Chihuahua wakhe zalikhonkotha izithunzi, ngoko ku fanele. Nokuba unguTata-kwihlabathi animal trainer, ngesilo Asikokwenu kwaye akayi kuba ude loo eneenkcukacha kakhulu ucingisisile (ngethemba) incoko.
MUSA azame ukuthabatha indawo yawo. ulwalamano lomntu ngesilo yeyona nto intle. Yinto kwakhona ebixhamla ubuncwane kunene, ezizodwa ayisebenzele nzima. Ukuba ngomhla wakho leeViwo ngeentsasa zayo ngoMvulo ngumoya elide kunye mfene yakhe, cela ukuba bazibandakanye yakhe ikofu, ukutsiba ngokupheleleyo. Ukuba uchitha ubusuku elisendlwini yabo okokuqala nje ukufumana ukuba ikati yabo oversized ulele ebhedini, ukusebenza jikelele ikati. Fair enobulungisa yaye kuloo mandlalo elide phambi kokuba.
UDON "T bahlekisa kubo. Ndithandana ikati lady? Ngaba Ingaliqabane lakho ukubonisa imifanekiso ebi- yakhe wonke umntu adibana? Ingaba iqabane lakho ukunxiba Chihuahua kuye imiso ngemiso, nangona oko inkwenkwe? Le asiyiyo indawo yakho kuligweba. amathuba, ukuba ezinye izithethe kunye isilwanyana sakho ezibonakala lingenangqiqo kubo, ngoko ukugcina ndimyeke ukuba ubuncinane.
Asilubandakanyi pet. Izilwanyana inomdla nomlinganiswa abantu. Ukuba ungafumana kungena sokuqa olungileyo pet ngayo, amathuba okuba ngumnini labo liza kulandela. Fumana izinto onokuzenza kunye ukuba pet friendly.
NGABA ziquka akho ukuphulula. Kuba uphuhlisa ezininzi, izilwanyana Bafana nabantwana. Kwaye ukuba ufuna ukujonga ukuba ikamva lakho liqaqambile kunye, makhe nezilwanyana zakho kumkhawulela kwaye ubone indlela bephefumlelana. Ukuba awuyithandi omnye nomnye ekuqaleni, ufake umzamo ukufumana apho. kuya kuba lula nje kuphela kube, kuya kuba yindlela kakhulu ukuba akungenise ezimbini ngakumbi kulwalamano lwakho.
Yenza i njengesenzo ezukileyo. Ngoko ke, mhlawumbi awufuni ukuba tag zabo pet ecaleni zonke umhla, kodwa iinzame koko ukuko. Bonke iqabane lakho kufuneka bazi ukuba xa unokuwa eluthandweni nabo ngenye imini, uya umthande ngesilo, kakhulu. Bhiyozela yokuzalwa yabo, okanye usenokuthenga ukudlel. Thabatha ukuba epakini ngokwakho. Izinto ezincinane usoloko ubale, kodwa xa kufikwa izilwanyana, ngamanye amaxesha izinto ezinkulu sebenza bhetele.